Semalt - HTML अनलाइनबाट पाठ कसरी निकाल्ने?
वेब पृष्ठहरू XMTML र HTML जस्ता पाठमा आधारित, मार्कअप भाषाहरू प्रयोग गरेर बनेको छ, र तिनीहरू पाठ, छवि वा भिडियो फाराममा उपयोगी जानकारीको धनी राख्छन्। यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि सबै वेब पृष्ठहरू मानव जातिको लागि डिजाइन गरिएको हो र स्वचालित बट्स वा मकड़ीहरूको लागि उपयुक्त छैन। यद्यपि HTML अनलाइनबाट पाठ निकाल्न धेरै अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै शक्तिशाली वेब डेटा निकासी उपकरणहरू जस्तै मोजेन्डा, Import.io, Octoparse र किमोनो ल्याबहरू हुन् जसले दुबै गतिशील र साधारण वेब पृष्ठहरूबाट स्क्र्याप जानकारीलाई मद्दत गर्छन्। दुर्भाग्यवस, यी उपकरणहरूले HTML अनलाइनबाट अनलाइन पाठ पठाउन सक्दैन। यसैले, हामीले अन्य समान सेवाहरूको लागि अप्ट इन गर्नु पर्छ। निम्न अनुप्रयोगहरूका साथ तपाईले परिष्कृत कोडहरू लेख्नु पर्दैन र HTML अनलाइनबाट सजीलै पाठ निकाल्न सक्नुहुन्छ।
१. HTML लाई ईमेल ईमेल कन्भर्टरमा:
यो HTML अनलाइनबाट पाठ निकाल्नको लागि उत्तम र सब भन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू मध्ये एक हो। HTML मा पाठ ईमेल कन्भर्टर प्रोग्रामर र गैर कोडरहरूको पूर्व विकल्प हो र तिनीहरूलाई पीडीएफ र HTML फाइलहरूबाट सादा पाठ स्क्र्याप गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, यो उपकरण सामूहिक ईमेलहरू पठाउन प्रयोग गरिन्छ र तपाईंको ब्रान्डलाई राम्रो तरिकाले बढावा दिन मद्दत गर्दछ। तपाईं यसलाई तपाईंको HTML ईमेलको पाठ संस्करणहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहानु भएको जति पाठ झिक्न सक्नुहुन्छ। यो "जादू" मोडमा अपरेट हुन सक्छ जहाँ तपाइँले त्यसलाई यूआरएलमा देखाउनुहुन्छ, र HTML लाई पाठ ईमेल कन्भर्टरमा तपाइँको आवश्यकता अनुसार सामग्री स्लाइस र पासा गर्दछ।
२. HTML पाठ एक्स्ट्रक्टर:
तपाईंले भर्खर यूआरएल टाँस्नुपर्दछ, कन्भर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र एचटीएमएल पाठ एक्स्ट्रक्टरलाई यसको प्रकार्य प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनुहोस्। यो अनलाइनमा राम्रो सेवाहरू मध्ये एक हो र HTML अनलाइनबाट पाठ निकाल्न उद्यमहरू र सामग्री क्युरेटरहरूले प्रयोग गर्दछ। तपाईं छोटो समयमा पाठ प्राप्त गर्नुहुनेछ र अनौंठो र अर्थहीन विज्ञापनको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। साथै, तपाईं यो सेवा फार्म भरने र नेभिगेसन कार्यहरू स्वचालित गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले केही प्रकारका HTML फाइलहरू र स्क्र्याप पाठका केही प्रकारहरू पढ्न सक्दछ, तपाईंको समय र उर्जा बचत गर्न। साथै, तपाईं सजिलैसँग विभिन्न प्रकारको जटिलताको मानवीय कार्यहरूको अनुकरण गर्न प्रशिक्षण दिन सक्नुहुनेछ।
Textise धेरै छिटो काम गर्दछ र इन्टरनेट मा एक उत्तम सेवा हो। तपाईं यसको प्रयोग गुणवत्तामा सम्झौता नगरी HTML अनलाइनबाट पाठ निकाल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो अनुकूलन योग्य छ र पाठ स्क्र्यापि tasks कार्यहरू स्वचालित गर्न सक्दछ। सामान्यतया, Textise पूर्ण-वेब वेब स्क्रेपर भन्दा एक अनलाइन अनुप्रयोग हो। यदि तपाईंसँग पीडीएफ फाईलहरू वा एचटीएमएल फाइलहरूको ठूलो संख्या छ र ती सबैबाट पाठ स्क्र्याप गर्न चाहनुहुन्छ भने Textise निश्चित रूपमा तपाईंको काम सजिलो हुनेछ।
HTML. HTML क्लीनर:
यदि तपाईंसँग पर्याप्त कोडिंग सीप छैन वा प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ भने, HTML क्लीनर तपाईंको लागि सही विकल्प हो। यस उपकरणले मुख्य रूपमा प्रदान गरिएको पूर्वनिर्धारित डाटा सेटहरूको लागि HTML फाइलहरू स्क्यान गर्दछ र केही क्लिकमा HTML अनलाइनबाट पाठ निकाल्न सक्छ। यसले हामीलाई सहि, पढ्न योग्य र स्केलेबल डाटा प्रदान गर्दछ र वेबसाइटहरूको खोजी ईन्जिन दर निर्धारण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।